अनलाइन अफलाइन अनलाइन
भन्नु नै विकासमा
जनताको भागीदारी हो ।
नेपालको प्रदेश नम्वर दुइको पहिलो आधुनिक र प्रादेशिक समाचारपत्रका रुपमा“जनकपुर टुडे” को विकासलाई मैले अपरिहार्य ठहर्याएको थिएँ । अहिले यो समाचारपत्र प्रतिष्ठाको चुनौतिमा परेकोछ । केही समयअघिसम्म दुइ नम्वर प्रदेश यसको आफनो स्थानीय बजार थियो । अहिले त्यो क्षेत्र व्यापक भएको छ । म आफैंले जनकपुरमा वसेर केही समय राजनीतिक पत्रकारिता गरेको कारणले भनौं वा शहीद सरोजप्रसाद कोइराला तथा स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधि जस्ता मूर्धन्य र तेजस्वी राजनीतिज्ञहरुको निकट वसेर राजनीतिलाई हेर्न पाएको व्यक्तिका हिसावले भनौं, जनकपुरसंग मेरो गहिरो भावनात्मक सम्वन्ध छ । महन्थ ठाकुरजस्ता हस्तीहरुसंगको संगतले मेरो राजनीतिक चेतनालाई तिखारेको पनि मैले विर्सिन हुँदैन । भाग्यवश, मेरा भाई तथा सहयोगी वृजकुमार यादवले जनकपुरका लागि मिडियाको एउटा सानो नक्सा कोरे । त्यो नक्सा अहिले जनकपुर टुडे समूहका रुपमा प्रकट छ । यसका कार्यकारी संचालक तथा सम्पादक वृज कुमार यादवसंग जनकपुर टुडेका तीनवटै शाखा पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनका वारे कुरा हुने गरेकोछ । खासगरेर, यी माध्यमबाट उत्कृष्ट उत्पादनको वारे मेरो पटक पटक कुराहुने गरेको हो । मैलेबृजकुमारजी संगको वार्तामा जनकपुर टुडेले आफनो अनलाइन संस्करणलाई प्रभावकारी वनाउन वढी कसिनुपर्ने र यसलाई दह«ो वनाउनुपर्ने वताउँदै आएको छु । विस्तारै विभिन्न प्रकाशनका अनलाइन संस्करणहरु गतिशीलहुने वित्तिकै यसका अन्य सम्वन्धित प्रकाशनहरु, रेडियो र टेलिभिजन, स्वचालित हिसावले गतिशील हुन करै लाग्दछ । वेग्ला वेग्लै गतिका संचार माध्यमहरु वीच आपसमा प्रतिस्पध्र्दागर्नु निकै रोचक विषय पनि हुन्छ ।अहिले देशका प्रायः सवै नाम चलेका प्रकाशनहरुले सातवटै प्रदेशबाट आ–आफनो प्रकाशन शुरु गरेका छन वा गर्ने क्रममा छन । निश्चय पनि, प्रादेशिक नेपालको भोलिको नक्सा रोचक हुनेछ । प्रादेशिक नेपालमा संचार व्यवसायको महत्वलाई वुझेर नै अहिले देशका सवैजसो राष्ट्रिय प्रकाशन गृहहरुले प्रादेशिक प्रकाशनको योजना गरेका होलान । तर, केन्द्रीय प्रकाशनका स्थानीय संस्करणहरुलेप्रादेशिक समाचारपत्रसंग प्रतिस्पध्र्दा गर्नसक्ने अवस्था त्यति सहज हुने देखिदैन । प्रदेशको प्रतिष्ठाका लागि राष्ट्रिय प्रकाशनहरुको स्थानीय संस्करण प्रकाशितहुनु राम्रो कुरा हो । तर, नेपाली प्रदेशको सीमित अर्थतन्त्रले यसलाई टिकाउन सक्छ कि सक्दैन ?यसले आपूmलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ?कुरा यत्तिमात्रै हो ।यस्तोमा स्थानीय वा प्रादेशिक प्रकाशनले आफनो बजारलाई सुस्थीरराख्न वढी मेहनत गर्नुपर्नेछ । नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक आवरणभित्र लैजाने एउटा काम समाप्त भएको छ । तीन तहको चुनाव, राजनीतिक दलहरुका वीचको लेनदेन र सम्वन्धहरु तथा सँधै वैजनी रंगमा देखिने विकासका सपनाहरु वर्तमानको राजनीतिका मुख्य तत्व वनेका छन । नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, संसारकै राजनीतिमा संघीयता कडा शासन व्यवस्थाका रुपमा चिनिन्छ । हाम्रो देशमा हामीले दशक लामो वादविवादपछि संघीय शासन प्रणालीलाई अपनाएका छौं । यो क्रममा हामीले संघीय शासनका चुनौतिलाई कुन हदसम्म वुझेका छौं ? संघीय शासनको स्वरुपका वारेमा हामीले कति सूचना जम्मा गरेका छौं ? यी सूचनाहरुको महत्व कति रहन्छ ? यो अवस्थाको चित्रण अहिले नै गर्न सकिने स्थिति र अवस्था छैन । सामान्यतयाः सूचना मानिसका नियमित गतिविधि अथवा सिर्जनाहरुको विवरण हो । यो विवरणको अध्ययन र अनुशीलन विना संघीय राजनीतिको खाका तयारपार्न सकिदैन ।वीस वर्षअघिसम्म इन्टरनेटको क्षेत्रमा अलिकति पनि उर्जाको उपभोग हुँदैनथ्यो । अहिले त्यो अवस्था लगभग उल्टिएकोछ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र प्रभाव यति छिटो छिटो भइ रहेको छ कि विश्वमा उत्पादनहुने उर्जाको दश प्रतिशत खपत डिजिटल अर्थतन्त्रले नै गर्ने गर्दछ । आजभन्दा तीन दशक पहिले यति विजुली भयो भने संसार नै उज्यालो हुन्थ्यो । अव ती दिनहरु वितेका छन । यतिवेला संसारमा हवाई यातायातको संचालनमाभन्दा ५० प्रतिशतवढी उर्जाको खपत तथ्यांकहरुको आवागमनमा हुने गरेकोछ ।स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा फडको मार्दैन भन्ने अवस्था अव रहेन । खासगरेर, नेपालको प्रादेशिक विभाजनपछि विभिन्न प्रदेशहरुमा विकासको नयाँ परिकल्पना हुनु अपरिहार्य छ । एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशसंग अनियन्त्रित र स्वतन्त्र हिसावको सम्वन्ध विकसितहुने वित्तिकै चमत्कारिक ढंगले विकासको प्रारम्भ हुन सक्दछ । तर, कर र राजस्वका नाममा केन्द्रीय अर्थतन्त्रले प्रदेशहरुको स्रोतमा आँखा लगायो भने संघीयता विकास होइन, अभिशाप सावित हुनेछ । हामी कहाँ अहिले जुन प्रकारको संघीयताको खोजी भएको छ त्यो त्यति जटिल छैन । नेपालीको लागि संघीयताको विकास भन्नु नै विकासमा जनताको भागीदारी हो । जनताले आफनो क्षेत्रको प्राकृतिक, मानवीय र अन्य विविध प्रकारका स्रोतहरु पत्ता लगाएर त्यसको दीगो विकासमा जन प्रतिनिधिहरुलाई दवाव दिनु पर्दछ । यो प्रक्रियामा पत्रपत्रिकाले नियमित डिस्कोर्स शुरु गराउने, नयाँ वनेका कानूनहरुलार्ई लागुगर्ने र विकासका नयाँ नयाँ क्षीतिज खोल्न आवश्यक नयाँ कानून निर्माणमा जनतालाई संलग्न गराउने जस्ता विषयहरुमा निरन्तर ध्यान दिनु पर्दछ । हाम्रो देशमा पत्रपत्रिकाको विश्वसनीयता सम्पूर्ण रुपले स्थापित भएको छैन । कतिपय प्रदेशमा पत्रकारिता भन्ने विषय नै अस्तित्वमा छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । पत्रपत्रिका कति रहरले चलेका छन, कति चुनावी लहरले ल्याएका छन । यो अवस्थामा पत्रकारहरुले निष्पक्ष र व्यवसायिक भएर आवाजहीन जनताकोआवाजको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । पत्रकारितामा निष्पक्षताको ठूलो मूल्य हुन्छ । तर, निष्पक्षताका नाममा जनताका आवाज र भावनाहरु निस्तेजगर्ने कुनै काम पत्रकारले गर्नु दुःखदायी हुन्छ । यता केही समयदेखि पार्टीगत भावनाले ओतप्रोत भएका राजनीतिक पर्चाकारिता पत्रकारिताको नाममा देखिन थालेको छ । यो धेरै नै कष्टकर विषय हो । पत्रकारिता पक्षपाति राजनीतिको शिकार हुने हो भने लोकतन्त्रको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह लाग्दछ । आजको समाचारपत्रले लोकतन्त्रको प्रभावकारिताका लागि, आर्थिक विकासका लागि एजेण्डा तयगर्ने हो । समाचार त सवैले छाप्दछन, त्यो संगै सन्तुलित विचारको प्रस्तुति नै आजको पत्रकारिता हो ।